Ciidamada Danab oo la sheegay in ay Shabaab kala wareegeen deegaanka Sabiid ee Sh/Hoose… – Hagaag.com
Ciidamada Danab oo la sheegay in ay Shabaab kala wareegeen deegaanka Sabiid ee Sh/Hoose…
Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in Ciidamada xoogga dalka ee ka tirsan Guutada DANAB ee sida gaarka u tababaran la wareegay deegaanka Sabiid, halkaasoo gacanta ku hayeen Al-Shabaab.
Sida wararku sheegayaan Ciidamada oo shalay gelinkii dambe la wareegay deegaanka Sabiid ayaa saaka howlgalo ka wada, waxaana deegaanka Sabiid uu qiyaastii 40KM dhanka Galbeed ka xigaa magaalada Muqdisho.
Wararka qaar ayaa sheegaya in howlgalka Ciidamada xoogga dalka ay ku qaadeen deegaanka Sabiid iyo deegaanada ku dhow dhow uu yahay sidii ay uga hortagi lahaayeen gaadiidka qaraxyo laga soo buuxiyay oo Al-Shabaab ku diyaarinayeen deegaankaas iyo kuwo u dhow dhow.
Al-Shabaab ayaa isaga baxay deegaanka Sabiid, waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan inay ka cabsi qabaan dagaalo ka dhaca deegaanka, inkastoo xaalada tahay mid degan.
Dhinaca kale Ciidamada Kumaandooska ee Danab ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada deegaano ka tirsan degmada Afgooye, iyagoo qorsheynaya inay weerar ku qaadaan deegaanada Shabaabka ka taliyaan ee hoostaga Afgooya.